इच्छुक उद्यमीहरू: उत्पादन लागत
इच्छुक उद्यमी आफ्नो व्यवसाय लाभदायक छ कि छैन भनेर गणना गर्नुपर्छ। यस मुद्दा को मुख्य पक्षहरू को - उत्पादन लागत।
आर्थिक लागत अर्को उद्यम मा उत्पादन को उत्पादन र सामान वा सेवा वितरण लागत भनिन्छ। तिनीहरूले पैसा को मामला मा व्यक्त र उत्पादन गतिविधिहरु लागि आवश्यक श्रम सेवा र राजधानी लगानी एक मूल्यांकन समावेश छन्। उत्पादन लागत अन प्रत्यक्ष प्रभाव को लागत को गणना उत्पादन।
आर्थिक साहित्य मा विभिन्न वर्णन लागत को प्रकार धेरै वर्गीकरण उत्पादन को। तिनीहरूलाई केही विचार गर्नुहोस्।
वास्तविक - ती लागत आर्थिक निर्णय मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव छ। बीमा अवस्थामा, ऋण राहत र अरूलाई कहिल्यै परिसंचरण मा आउनेछ भनेर मा खर्च मुद्रा - तिनीहरूले "छर्रे" को लागत गर्न विरोध गर्दै हुनुहुन्छ।
लागत स्पष्ट (लागत लेखा) लागत लेखा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले अनुसार उत्पादन लागत र उत्पादन को बिक्री (05.08.1992 G देखि) को संरचना मा आरएफ सरकार नियमावली द्वारा स्थापित संग कटिबद्ध छन्। यो समावेश लागत सामाग्री; सामाजिक योगदान; श्रम लागत, निश्चित सम्पत्ति को मूल्यह्रास, लागत अन्य।
लागत Entrepreneurial निश्चित सम्पत्ति र काम राजधानी, विभिन्न भुक्तानी मा निवेश वित्त, लेखा बाहेक समावेश, (कर, शुल्क कर, साझेदारी मा लाभांश, भन्सार शुल्क)। यो श्रेय गर्न सकिन्छ, र मौका लागत, भनिन्छ जो आरोपबाट।
उत्पादनहरु को एक निश्चित रकम को रिलीज संग सम्बन्धित लागत सञ्चितिको भनिन्छ। आवंटन छन् औसत - तिनीहरूले मात्रा प्रति एकाइ गिरावट। सीमान्त लागत प्रति एकाइ मात्रा परिवर्तन को गणना।
उत्पादन लागत तय वा चल गर्न सकिन्छ। उत्पादन को कारक मा परिवर्तन स्थिर स्वतन्त्र, उत्पादन को मात्रा, आदि यी लागत इलाका, भवन, व्यवस्थापन कर्मियों को मर्मतका समावेश गर्नुहोस्। लागत चल, अर्कोतर्फ, उत्पादन मात्रा आधारमा परिवर्तन गर्न विषय हो। यो कच्चा माल, श्रम र अन्य कर्मचारीहरु, आदि को अधिग्रहण को लागत हुन सक्छ यस सन्दर्भमा, अझै पनि पूर्ण खडा, वा कुल उत्पादन लागत दुवै निश्चित र चल समावेश गर्नुहोस्।
विशेषज्ञहरु स्थिर र चर को आधार मा लागत को निर्धारण एक वास्तविक आर्थिक अर्थमा छ भनेर याद गर्नुहोस्। यो दृष्टिकोण हामीलाई राजस्व वृद्धि र हानि र थप कमी योजना, उद्यम को प्रतिस्पर्धा निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
उत्पादन लागत मा विशेष गणना छन् N ryamye लागत रूपमा विनियोजन। साथै, यो संग उपकरण, मशीनरी, वाहन, आदि सम्बन्धित खाता र ई ksplutatsionnye लागत लिन आवश्यक छ
तसर्थ, लागत, उत्पादन साधारण समूह मा वर्गीकृत को विकास मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव:
क) प्राथमिक आर्थिक तत्व (जस्तै, श्रम लागत);
ख) खर्च (यो लेख गणना - कच्चा सामाग्री, इन्धन, ऊर्जा, मर्मतसम्भार, आदि);
ग) उत्पादन लागत गर्न लागत को निर्धारण को विधि द्वारा (प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष);
उत्पादन लागत को गठन मा उनको भूमिका लागि G) (आधारभूत - overheads); घ) मा उत्पादन, ई परिवर्तन को डिग्री मा निर्भर गर्दछ) को घटना समय (वर्तमान वा आगामी, deferrals) मा निर्भर गर्दछ।
entrepreneurial गतिविधिहरु पूरा लागत को लागि लेखांकन सामान वा सेवाहरूको लागत गणना गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, उत्पादन लागत को कमी उत्पादन को एक महत्वपूर्ण कारक हो। त्यहाँ अनुभवी प्रबन्धकहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो लागत, कम गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। र यो शुरुवात उद्यमी यो कुरा मा हेर्न गर्नुपर्छ हो।
उज्यालो पैदल ट्यांक टी-18: प्रदर्शन विशेषताहरु, लडाई प्रयोग
वार्षिक ग्याँस खपत को गणना
गैर-फलाम धातु: सुविधाहरू र प्रयोगको क्षेत्रमा। गैर-फलाम धातु संसाधन
को Lyric Lermontov मा एकाकीपनको को नमूना। को गीत मा एकाकीपनको विषय मेरी Lermontov
Ondulin - स्थापना र मर्मतका
हंगेरीको बारेमा एकदम: इतिहास, आकर्षण, स्की रिसोर्ट, हंगरीमा सबैभन्दा उच्च पर्वत
हामी किन पाठ्यक्रम सिस्को चाहिन्छ?
वर्ग शिक्षक बच्चाहरु र आमाबाबुबाट इच्छा।
जूलिया Svetlakova: प्रसिद्ध humorist पहिलो पत्नी
प्राविधिक Singularity - Apocalypse कोड
एक फ्लाई ग्याँसचुलोबिना कसरी चयन गर्ने?
पहाड खरानी। लोक चिकित्सा मा विवरण र प्रयोग